L3 + Tshintshela abavelisi kunye nabaxhasi - China L3 + Tshintshela Ifektri
CS6200-52X-P-EI Dual Stack 10G 48 amazibuko PoE Ethernet Tshintsha
I-CS6200-52X-P-EI 10G yokuhambisa umzila PoE switch kuye kwaqhubela phambili izixhobo kunye noyilo loyilo lwesoftware. I-CS6200-52X-P-EI ibonelela ngokufumaneka okuphezulu, ukusasazeka, ukhuseleko, ukusebenza kakuhle kwamandla, kunye nokusebenziseka ngokulula kwezinto ezinesityebi ezinje nge-VSF, IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt kunye nezixhobo zamandla ezingafunekiyo. Ilungele ukudityaniswa koxinano oluphezulu okanye umaleko osisiseko kwiinethiwekhi zekhampasi okanye iinethiwekhi zeSMB. Iimpawu eziphambili kunye neeMpawu eziPhambili ze-60W PoE Iipoti zokuqala eziyi-8 ze-PoE zixhasa i-IEEE 802.3bt (60w). Banokuba ...
CS6200-28X-HI-24F yeNtsebenzo ePhakamileyo ye-10G yeFibre Ethernet switch epheleleyo
I-CS6200-28X-HI-24F-isizukulwana esilandelayo se-10G iswitshi yokuhambisa umzila esinezixhobo eziphambili kunye noyilo loyilo lwesoftware, eyakhelwe ngaphakathi kwimodyuli ye-1 + 1 yokuphinda isetyenziswe ngamandla. I-CS6200-28X-HI-24F ibonelela ngokufumaneka okuphezulu, ukusasazeka, ukhuseleko, ukusebenza kakuhle kwamandla, kunye nokusebenziseka ngokulula ngezinto ezinamandla ezinje nge-VSF (i-Virtual switch Framework), izixhobo zamandla ezingafunekiyo kunye neOpenFlow. Ilungele ukudityaniswa koxinano oluphezulu okanye umaleko osisiseko wenethiwekhi yekhampasi, i-ISP, kunye neshishini. Iimpawu eziphambili kunye nokuqaqambisa ...
CS6200-8G24S2Q-EI Dual Stack 40G Ethernet Routing Fibre Tshintsha
I-DCN CS6200-8G24S2Q-EI yi-L3 e-stackable switching switch kunye ne-40GE fiber uplink port. I-CS6200-8G24S2Q-EI inezixhobo eziphambili kunye noyilo loyilo lwesoftware, eyakhelwe-ngaphakathi kumbane ophindaphindiweyo wamandla. I-CS6200 ibonelela ngokufumaneka okuphezulu, ukusasazeka, ukhuseleko, ukusebenza kwamandla, kunye nokusebenza ngokulula kwezinto ezinje nge-VSF (Virtual switch Frame-work) kunye nee-fan ezi-3 ezihleliweyo ezizenzekelayo. Ilungele uxinizelelo oluphezulu lwe-ag-gregation kuthungelwano lweshishini okanye uthungelwano lweCampus. Kwi-SMB, CS62 ...